व्हीलचेयर प्रशंसापत्र र संयुक्त राज्य अमेरिका भित्र Karman र ग्राहकहरु को लागी समीक्षा
जाँच गर्नुहोस् हाम्रो व्हीलचेयर समीक्षा र प्रशंसापत्र। हामी हाम्रा ग्राहकहरु सबै एक समीक्षा छोड्न स्वागत गर्दछौं। दुबै राम्रो र नराम्रो, तर अधिकतर ईमानदार। कृपया हाम्रो साथ साझा गर्नुहोस् व्हीलचेयर कथा। चाहे तपाइँ यसलाई आफैं किन्नुभयो वा यो एक मायालु को लागी किन्नुभयो। हामी को ख्याल राख्छौं व्हीलचेयर समीक्षा र प्रशंसापत्र तपाइँ साझा गर्न सक्नुहुन्छ र एउटै कथा संग अरु लाई छुनुहोस्। तल तपाइँ दुबै गुगल र Yopto मा समीक्षा पाउनुहुनेछ जुन ग्राहकहरु जसमा हामी आशा गर्दछौं कि तपाइँ भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ र भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।
19255 सैन जोस एवेन्यू, उद्योग को शहर
4.6 239 समीक्षा
एन्जेला होल्स्टेन ★★★★★4महिना पहिले
कस्तो अचम्मको कम्पनी। हामीले हाम्रो प्राप्त गर्यौं व्हीलचेयर तर किनभने यो अपग्रेड गरिएको थियो, हार्डवेयर अनजानमा छुटेको थियो। इमेल कम्पनी र एक दुई घण्टा भित्र प्रतिक्रिया प्राप्त भयो। हामी पूर्वी तटमा छौं। एम्बर साँच्चै अद्भुत थियो। बुझियो … थप उत्पादन र तुरुन्तै थाहा थियो के भयो। उनको प्रतिक्रिया समय उत्कृष्ट थियो र उनले हाम्रो समस्या तुरुन्तै समाधान गरिन्। राम्रो ग्राहक सेवाको लागि सोध्न सकेन। उहाँहरूका लागि काम गर्न पाउनु उहाँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो उत्पादनसँग अत्यन्तै सन्तुष्ट छौं र कुनै पनि मेडिकल खरिदहरूको लागि तिनीहरूलाई अत्यधिक सिफारिस गर्दछौं।
सारा गुडलिन ★★★★☆6महिना पहिले
हामीले कुर्सी प्राप्त गर्ने आशा भन्दा लामो समय पर्ख्यौं, तर यो भयानक छ! यो हल्का तौल छ, तर ठोस र म्यानुअल गर्न धेरै सजिलो छ।
सुसान नीलसन ★★★★★ 11 महिना पहिले
मेरी सासु उनको नयाँ Karmen माया गर्नुहुन्छ व्हीलचेयर। अब उनी सजिलै संग हामी संग आउटिंग मा जान को लागी सक्षम छन् र हिड्न सक्छिन् जब उनी चाहान्छिन् र सवारी गर्न सक्छिन् भने उनी टायर। यो हल्का कुर्सी को लागी Karmen धन्यवाद!
मुफद्दल खम्बाटी ★★★★★5महिना पहिले
आश्चर्यजनक मूल्यहरूमा अद्भुत दायरा! सबैलाई उच्च सिफारिश!
पीटर प्यान ★☆☆☆☆ पछिल्लो हप्तामा
वाह यो कर्मन हेल्थकेयरको उपाध्यक्ष जस्तो देखिन्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिमा फिलिम गर्दा उनले कुल जनावर जस्तै काम गरे। उनले फोटोग्राफरको तिपाईलाई पनि लात हाने । उनको नाम डेभिड चाओ दुखी दयनीय व्यक्ति जस्तो देखिन्छ।
माइक बुसो ★★★★★9महिना पहिले
हामीले मेरी श्रीमतीको लागि Karman S-Ergo 115 पायौं। म साँच्चै प्रशंसा गर्छु कि यो धेरै भारी भन्दा धेरै हल्का छ व्हीलचेयर जुन अरूले हामीलाई प्रस्ताव गरे। दस पाउण्ड धेरै फरक पर्दैन यदि तपाइँ यसलाई मात्र रोलिंग गर्दै हुनुहुन्छ, तर यदि तपाइँ उठाउनुहुन्छ … थप यो कार भित्र र बाहिर, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेसम्म, यसलाई कुनै मर्मतको आवश्यकता परेको छैन, र म आशा गर्छु र आशा गर्दछु कि यो मामला रहनेछ। म यसलाई अत्यधिक सिफारिस गर्दछु।
डेभिड बेकन ★★★★★ एक वर्ष पहिले
मेरो बुबाको हेरचाहकर्ताको रूपमा, मलाई एक चाहिन्छ हल्का व्हीलचेयर हामी उहाँको सेवानिवृत्ति समुदायबाट टाढा हुँदा म उहाँसँग प्रयोग गर्न सक्छु। विभिन्न प्रकारको अनुसन्धान पछि व्हीलचेयर, मैले LT-980 अर्डर गरें। मैले पाएँ … थप हिजो, र म निर्माण संग प्रभावित छु गुणस्तर र सबै सुविधाहरू जसले यसलाई पोर्टेबल र ढुवानी गर्न सजिलो बनाउँदछ। भारी संग अनुभव छ व्हीलचेयर धेरै समय पहिले, LT-980 हल्का केहि चाहिने जो कोहीको लागि एक उत्कृष्ट कुर्सी हो। दुःखको कुरा, मेरो बुबाले यसलाई प्रयोग गर्ने मौका पाउनु अघि नै हालै बित्नु भयो, तर मलाई यो मनपर्छ र म यसलाई आवश्यक पर्न सक्ने परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग भविष्यमा प्रयोगको लागि राख्न जाँदैछु।
मोनिक ड्रीफ ★★★★★ 11 महिना पहिले
Karman 19" खरिद गरियो स्टील यातायात कुर्सी w/ हटाउन सकिने armrests। द यातायात कुर्सी धकेल्न सजिलो छ र नियमित ढोकाबाट फिट हुन्छ। आवश्यक भएमा हातको विश्राम (हरू) हटाउन सजिलो हुन्छ। खुट्टा आराम हटाउन वा तिनीहरूलाई स्विंग गर्न सक्नुहुन्छ … थप पक्षहरू (उनीहरू अगाडि नभएसम्म स्थानमा रहनेछैनन्, तर यो Velcro स्ट्र्यापको साथ सजिलो समाधान हो)। सिटमा ए पातलो कुशन। कुर्सीमा व्यक्तिलाई सुरक्षित गर्न बेल्ट जोडिएको छ। पाङ्ग्राहरू कडा काठ, टाइल र कार्पेटमा सजिलै घुम्छन्। यो यातायात कुर्सी भण्डारणको लागि फोल्ड गर्न सजिलो छ। (बिरालो स्वीकृत!)
एमी एरेन्सन ★★★★☆ एक वर्ष पहिले
यो हाम्रो पहिलो कर्मन हो व्हीलचेयर र अहिले सम्म यो साँच्चै राम्रो भएको छ। हामी हौं प्रयोग यो एक संक्रमणकालीन कुर्सी को रूप मा मेरो श्रीमान को शक्ति बाट बाहिर निकाल्न को लागी व्हीलचेयर। यो धेरै हल्का तौल, गुना गर्न सजिलो छ र मेरो एसयूवी को पछाडि फिट छ। … थप मेरो पति भन्छन् कि यो छोटो सिट समय को लागी एकदम सहज छ, उनी धेरै आफ्नो पावर कुर्सी मा "धेरै सुरक्षित" हुनुको लागी ब्यवस्थित छ त्यसैले उनी अझै समायोजित छन् तर सोच्छन् कि यो लामो समय मा एक महान कुर्सी हुनेछ! धेरै छिटो शिपिंग, सबै कुरा धेरै सजीलो संग गयो जब अर्डर पनि!
माइकल स्मिथ ★★★★☆ 11 महिना पहिले
यो संग धेरै प्रभावित व्हीलचेयर म राम्रो संग वरिपरि प्राप्त गर्न सक्षम छु। खुट्टा अन्य त्यसपछि त्यो ठूलो कुर्सी जारी संग केहि समस्या छ!
जेनेरोज महोनी ★★★★★ एक वर्ष पहिले
कर्मा हामी के खोजिरहेका थियौं, एक हल्का कुर्सी मेरी छोरी सजीलै कार मा राख्न सक्छिन् जब उनी मलाई कहीं लैजानु पर्ने थियो किनकि मँ 82 ड्राइभ गर्दिन र घुँडा काटिएको दाहिने खुट्टा। मेरो छोरीले कुरा गरेको महिला धेरै राम्रो र सहयोगी थिईन्। गरेनन् … थप वितरण गर्न धेरै समय लिनुहोस्। र सँगै राख्न को लागी सजिलो दिशाहरु। सानो दिशाहरु बाट गर्न को लागी र ज्यादातर पहिले नै गरीएको छ। साँच्चै महान मानिसहरु संग काम गर्न को लागी। धेरै धेरै धन्यवाद।
Blanca Arteaga ★★★★☆ एक वर्ष पहिले
मैले यो कुर्सी मेरो प्रेमी जो एमएस छ को लागी आदेश दिए। यो राम्रो संग बनेको छ। धेरै बलियो। मैले एन्टी टिप्पर अर्डर गरें तर उनीहरुलाई कुर्सीको साथ कहिल्यै पाइन। मैले एउटा ईमेल पठाएँ तर उनीहरुबाट सुनेको छैन। तर तपाइँ माया गर्नुहुनेछ कि कती राम्रो संग बनाइएको छ .. यहाँ छन् … थप तस्वीरहरु को एक जोडी। हात आराम कभर यसको साथ आउँदैन।
करेन सैक्स ★★★★★ एक वर्ष पहिले
हामीले पायौ यातायात कुर्सी आज मेरी श्रीमतीको लागि जसको खुट्टाको शल्यक्रिया भइरहेको छ र6देखि 8 हप्तासम्म यो बन्द गर्नुपर्नेछ। द गुणस्तर उत्कृष्ट छ र साँच्चै आरामदायक छ। यो सँगै राख्न को लागी सजिलो थियो - मैले दिशाहरु फेला पारेन … थप (त्यो कुर्सी को पछाडिको पकेट मा थियो जब सम्म म यसलाई इकट्ठा गरेको थिएँ।
डेभिड ब्रान्ड ★★★★☆ एक वर्ष पहिले
भर्खरै एल्युमिनियम २४ पाउण्ड प्राप्त भयो व्हीलचेयर मेरो खूबसूरत, पार्किन्सनको साथ बुजुर्ग आमा को उपयोग गर्न को लागी। विज्ञापन को रूप मा देखिन्छ, भोलि उनको सहयोगी बस्ने निवास मा उनलाई यो वितरण गर्न को लागी तत्पर। अमेजन को माध्यम बाट आदेश, प्राप्त … थप सही मोडेल, सही रंग छैन। निराश कि बरगंडी रंगीन कुर्सी के आइपुगेको थिएन, तर हामीले केहि रिबन थपेका छौं ताकि उनी पहिचान गर्न सक्छिन् कि कुर्सी उनको हो। आशा छ कि उनी यसको धेरै उपयोग पाउँछिन्।
रोजर गेर्जेमा ★★★★☆ एक वर्ष पहिले
हल्का कुर्सी मन पर्यो। रबर पाels्ग्रा मनपर्छ र कडा प्लास्टिक छैन। उनीहरु मार्क को कुशन टाइल फ्लोर मा छोड्छन्। कुल मिलाएर यातायात को लागी एक उत्कृष्ट विकल्प।
Ashleigh Pasley ★☆☆☆☆ एक वर्ष पहिले
गरीब ग्राहक सेवा। कुर्सी समायोज्य छैन, एक बर्ष भन्दा कम भन्दा कम मद्दत को लागी कम्पनी बाट एक कलब्याक प्राप्त गर्न असमर्थ, जब मेरो बिरामीले यो किन्नुभयो (म एक नर्सि home होम मा एक चिकित्सक हुँ।) उनले यस कुर्सी को लागी जेब बाट $ 1,000.00 भन्दा बढी तिर्नुभयो। अब, … थप औसत उपयोग र एक बर्ष भन्दा कम पछि, अगाडिको पाels्ग्रा टुक्रा टुक्रा हुँदैछन् र बिग्रँदैछन्। यो प्रयोग गर्न लायक छैन, र सबै भन्दा राम्रो कर्मा मेरो बिरामी को पेशकश गर्न सक्नुहुन्छ "यहाँ आइटम नम्बर छ, एक जोडी को लागी $ 100.00 मा उनीहरुलाई अर्डर गर्नुहोस्।" दयनीय। कस्तो प्रकारको व्हीलचेयर कम्पनीले मानिसहरुलाई यस्तो व्यवहार गर्दछ। गरीब निर्माण कुर्सी, र एक पटक उनीहरुसंग तपाइँको पैसा छ, उनीहरु तपाइँ संग गरीरहेछन्। होसियार!
ग्लोरिया र फ्रेड राउ ★★★★★ एक वर्ष पहिले
S-115 भर्खरै प्राप्त मेरो पत्नीहरु 3rd Karman कुर्सी हो, धेरै राम्रो, धेरै हल्का र धेरै राम्रो संग काम गर्दछ।
स्यान्डी गॉर्डन ★★★★★ एक वर्ष पहिले
अल्ट्रा हल्का Kerman आदेश दिए व्हीलचेयर Walgreens.com को माध्यम बाट। क्यालिफोर्निया बाट तुरुन्त पठाइयो र मैले आदेश दिए अनुसार मात्र थियो।
देना ब्लम ★★★★★ एक वर्ष पहिले
मैले एक Karman S-ERGO 305 हल्का Ergonomic किनेको व्हीलचेयर S-Ergo305Q16SS, २ l पाउण्ड।, छिटो रिलीज पाels्ग्रा, फ्रेम गुलाब रातो, सीट आकार १ "" WX १ "" डी, कारखाना समायोज्य सीट उचाई (१ Def "भुइँमा सीट) र यो शानदार छ। … थप म एक सानो व्यक्ति हुँ र मँ वास्तव मा कुर्सी को चौडाई मनपर्छ। यो सुपर को रूप मा राम्रो संग प्रयोग गर्न को लागी सजिलो छ।
जिलिसा पियर्सन ★★★★★ एक वर्ष पहिले
मैले मेरो पाएँ व्हीलचेयर छिटो र यो अचम्मको छ। यो यति हल्का कुर्सी प्याड नरम र आरामदायक छन्। म बिल्कुल माया गर्छु। र एक अतिरिक्त एमएस समाज संग काम को लागी धन्यवाद।
बेवर्ली Miloszewski ★★★★★ एक वर्ष पहिले
यो व्हीलचेयर मेरो 91 १ वर्षीया आमा र मेरो बुबा जो लोड र अनलोड गर्न को लागी आवश्यक छ को लागी एकदम सही थियो। ढुवानी एक समय लाग्यो र color्ग स्टक, छुट्टी को मौसम र एक मौसम घटना को बाहिर थियो! तर, यो राम्रो अवस्थामा आइपुग्यो र मेरी आमा माया गर्नुहुन्छ … थप यो!
जुडी गिल्सन ★★★★★ एक वर्ष पहिले
उत्पादन संग राम्रो संग परिवार को सदस्य को लागी पनी सजीलो डाक्टर को यात्रा को लागी कार मा राख्न को लागी बनाईएको संग खुसी।व्हीलचेयर गलैंचा मा र घर को ढोका बाट स्वतन्त्र रूप मा चल्छ।
दाना क्रौली ★★★★★ एक वर्ष पहिले
यो एक महान छ व्हीलचेयर। यो राम्रो देखिन्छ। यो हल्का छ, तर टिकाऊ छ। यो सजीलै संग तह गर्न को लागी स्टोर गर्न को लागी। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो मेरो बुढा बुबा को अनुसार सहज छ। पैसा को लागी महान मूल्य।
बिल lutz ★★★★★ एक वर्ष पहिले
आज यो प्राप्त भयो, छिटो डेलिभरी र यो बिल्कुल सही छ। कुर्सी मेरो पति को लागी सजीलै पिकअप को लागी पर्याप्त प्रकाश छ। हामी यो यात्रा सहज गर्न को लागी किनेका छौं र यसलाई गुना र चेक सामान को रूप मा पठाउन सक्षम हुनेछौं। संग धेरै खुसी गुणस्तर, … थप खुट्टा आराम छुट्टै छन् तर सजीलो मा राख्न र बन्द गर्न को लागी। म छोटो छु, ४ ”११, र कुर्सी मलाई राम्रोसँग फिट हुन्छ। म बसेको स्थिति बाट ब्रेक पुग्न सक्छु।
जोन रुबल ★★★★★ एक वर्ष पहिले
नियमित व्हीलचेयर माथि र तल सीढीहरू बोक्न धेरै भारी छन्। मैले लाइन मा एक Karman featherweight भेट्टाएँ र यसलाई किनेको। यो सीढीहरु माथि र तल लैजान सजिलो छ र मेरी श्रीमती भन्छिन् कि यो सहज छ र आफैं को लागी पैंतरेबाजी गर्न को लागी सजिलो छ। मात्र … थप हाम्रो लागि जवाफ।
डगलस रैप ★★★★★ एक वर्ष पहिले
हामीले भर्खर हाम्रो एस एर्गो ११५ प्राप्त गरेका छौं व्हीलचेयर र यो महान छ। १ "" आकार एक सही फिट छ र यो आरामदायक र हल्का छ। हटाउन सकिने सीट कुशन र contoured सीट धेरै राम्रो सुविधाहरु छन्। … थप छिटो रिलीज पाels्ग्रा यो हाम्रो सानो कार को पछाडि मा बिल्कुल फिट हुन्छ।
फ्रान्क जी ★★।। एक वर्ष पहिले
धेरै राम्रो। राम्रो संग निर्मित तर तपाइँले मलाई गलत रंग पठाउनुभयो। मैले बर्गन्डी एउटा आदेश दिएँ र मैले एक कालो पाएँ।
लुआना McCuish ★★★★★ एक वर्ष पहिले
कर्मन किने यातायात कुर्सी 19" सिटको साथ। यो जोड्न सजिलो फुटरेस्टहरू बाहेक पूर्ण रूपमा भेला भयो। कुर्सी उत्कृष्ट छ। यो सजिलै फोल्ड हुन्छ, सुरक्षित महसुस हुन्छ, आरामदायी र हल्का वजन हुन्छ। यसलाई चलाउन सजिलो छ। … थप र ताला। यो मेरो वृद्ध आमा संग एक ठूलो मद्दत हुनेछ।
व्हीलचेयर परीक्षण र GOOGLE मा पुन: समीक्षा र नि: शुल्क प्रोमो प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
हाम्रो न्यूजलेटर को सदस्यता लिन र हाम्रो ब्लग जाँच गर्न सम्झनुहोस्। त्यहाँ सम्बन्धित जानकारी को एक संसार छ गतिशीलता र व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु तेसैले हामी निश्चित रूप मा तपाइँ एक समीक्षा, तस्वीरहरु छोड्न को लागी प्रोत्साहित गर्दछौं, र गूगल र समुदाय दुबै हाम्रो फेसबुक र ब्लग सेक्सन मा तपाइँको कथा साझा गर्नुहोस्। तपाइँ खुशी हुनुहुनेछ कि तपाइँ गर्नुभयो र हामी संग सामेल हुन को लागी धन्यवाद। तपाइँको ग्यारेन्टी या त मात्र वा तपाइँको वारेन्टी कार्ड मा मेलिंग दर्ता गर्न नबिर्सनुहोस् ताकि हामी तपाइँलाई फाइलमा राख्न सक्दछौं कि तपाइँ सडक तल कुनै सहयोग को आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाइँ एक Yelper हुनुहुन्छ, कृपया हाम्रो Yelp खाता मा टिप्पणी गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छौं!
प्रयोगकर्ता व्हीलचेयर प्रशंसापत्र
"यो मात्र सबै भन्दा राम्रो छ व्हीलचेयर मैले कहिल्यै प्रयोग गरेको छु। ”
"यो मात्र सबै भन्दा राम्रो छ व्हीलचेयर मैले कहिल्यै प्रयोग गरेको छु। मैले अन्य प्रकार को कोशिश गरेको छु र उनीहरु सधैं एक समस्या वा अर्को थियो। यो कुर्सी धेरै सहज छ। मेरो मधुमेह र थकान को कारण, म कहीं जान सक्दिन जब सम्म म एक मा छु व्हीलचेयर र कर्मा ब्रान्ड जीवन धेरै रमाईलो बनाएको छ।
बस्ने मलाई अन्य कुर्सीहरु जस्तै परेशान गर्दैन र फ्रेम धेरै बलियो र बलियो अझै हल्का छ। मलाई राम्रो लाग्छ कि मेरा मायालुहरु लाई मलाई बारम्बार प्रतिस्थापन वा मेरो लागी कुर्सी भण्डारण मा बोझ छैन। म यो कुर्सी को अत्यधिक सिफारिश गर्दछु। ”
Irvine, CA बाट सारा फेरिस द्वारा समीक्षा
"मलाई यो एर्गो मन पर्छ व्हीलचेयर"
"मैले यो कुर्सी किनेको छु किनकि मेरो पुरानो कुर्सी धेरै भारी थियो। म आफैंले यो प्रबन्ध गर्न सक्छु र कार को विरुद्ध झुकाव र कार फ्रेम मा उठाएर यो मेरो कार ट्रक मा उठाउन सक्छु।
मैले कारमा नुहाउने चटाई राखें र कुर्सी सिधै भित्र पस्छ। मैले ब्रेक लगाएँ अन्यथा कुर्सी ट्रंकमा वरिपरि स्लाइड हुन्छ। मलाई लाग्दैन कि यसको कुनै बेफाइदा छ। मलाई लाग्दैन कि यो कुर्सी को एक खरीद निराश हुनेछ।
ह्युस्टन, TX बाट जो Cosh द्वारा समीक्षा
"Karman को अद्वितीय ergonomic सीट साँच्चै आरामदायक छ।"
"मैले आधा दर्जन यातायात कुर्सी को कोशिश गरें कर्मन को खोज गर्नु भन्दा पहिले Ergo उडान मोडेल enough मेरो लागि पर्याप्त प्रकाश (स्विंग टाढा खुट्टा सहित २१ पाउन्ड), ठूलो पर्याप्त पछाडिको पाels्ग्रा संग मलाई सजीलै उठाएको ढोका थ्रेसहोल्ड र असमान भूभाग मा कुर्सी पुश गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
त्यस्तै गरी बलियो मोडेल (सबै ब्रान्ड) साथी ह्यान्ड ब्रेक संग 28-33 पाउन्ड वा अधिक वजन, जबकि अन्य अल्ट्रालाइट मोडेलहरु (15+ पाउण्ड) लगातार घुमाउन र कुर्सी र यसको यात्री पछाडि ताने बिना साना टक्करहरु कुराकानी गर्न को लागी धेरै कमजोर थिए।
यसबाहेक, Karman को अद्वितीय ergonomic सीट साँच्चै आरामदायक छ, hiney- सुन्न "गोफन सीट" धेरै यातायात कुर्सीहरु को विपरीत। को गुणस्तर र Karman को कारीगरी Ergo उडान, पहिले नै उल्लेख भयानक सुविधाहरु संग युग्मित, यो राम्रो संग उच्च मूल्य ट्याग लायक बनाउन; म यो कुर्सी को लागी पर्याप्त सिफारिश गर्न सक्दिन! "
Tacoma, WA बाट लौरी एल द्वारा समीक्षा
“यो उत्तम हो व्हीलचेयर मैले कहिल्यै सिफारिस गरेको छु "
“यो उत्तम हो व्हीलचेयर मैले कहिल्यै निर्धारित गरेको छु, र म आफैंले यो बाहिर कोसिस गरेको छु, यो धेरै सहज छ, म पनी साहित्य र यसको बारे मा जानकारी पढ्छु त्यसैले म बुझ्न सक्छु कि यो किन यति सहज छ र मेरा बिरामीहरु लाई व्यक्तिगत रूप मा मलाई भनिएको छ कि यो धेरै हल्का छ र उनीहरु यसलाई लिन्छन् उनीहरु जहाँ गए पनि।
कुनै पनी जब तपाइँ यो मा बस्नुहुन्छ व्हीलचेयर, यो धेरै नरम लाग्छ, अझै बलियो छ, र यो मोडेलमा धेरै सुविधाहरू छन् म छक्क परें यसले के गर्न सक्छ, र यसको फोल्ड गर्न मिल्ने तरिकाले, धेरै होइन। व्हीलचेयर ती सुविधाहरू फोल्ड गर्न योग्य छन्। समग्रमा, यो एक उत्कृष्ट छ गुणस्तर व्हीलचेयर"
Pasadena, CA बाट डा। रिचर्ड Caal द्वारा समीक्षा